တွေ့ဆုံပွဲ ပုံရိပ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Hoax » တွေ့ဆုံပွဲ ပုံရိပ်များ
Posted by ဆူး on Jun 15, 2011 in Hoax | 30 comments
ဆူး စိတ်ကူး တွေ့ဆုံပဲ ပုံရိပ်
အီးတုံးရဲ့ တွေ့ဆုံပွဲ ပြီးဆုံးသွားတဲ့ ပိုစ်လေး ဖတ်လိုက်ရတော့ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ရွာသားတွေ ဘာတွေ လာကြသလဲ ဆိုတာ အားလုံး မြင်ယောင်သွားအောင် ဖန်တီးပေးလိုက်မယ်။
အဲဒီနေ့ မနက်ကပေါ့.. အလုပ်တွေ ကိုယ်စီ နဲ့ ရှုပ်နေရင်းနဲ့ ချိန်းထားတဲ့ နေရာကို တွေ့ဖို့ အားလုံး သွားကြတယ်။ မျက်နှာ မြင်ရင် တယောက်နဲ့ တယောက် အတိတ်က ရွာထဲမှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စလေးတွေ အပြတ် ရှင်းမလို့ကြံစည်ရင်း သွားခဲ့ကြတာပေါ့။
အီးတုံးပေါ့.. အိပ်ပျော်နေတာ.. အချိန်လင့်တော့ မလို့..
ကျွန်တော် အာဂ တွေ့လို့ကတော့ အပြတ်ရှင်းဖို့ အားထုတ် နေတာပေါ့ကွယ်။
အီးတုံးက အိပ်ယာ နိးနိးချင်း ညက အိပ်မက် ထဲမှာ တမျိုးပဲ.. အကာအကွယ် ရအောင် တခုခုတော့ စီစဉ်မှ ဖြစ်မယ် ဆိုပြီး တွေးလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ..
အီးတုံးကတော့ ကိုယ်ရံတော် ဘဲဘဲ ကို ခေါ်လိုက်တာပေါ့.. ၀တ်စုံ ပြည့်နဲ့ လိုက်ပါဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။
ကျနော် ကို အီးရိုး အလှနတ်သမီး လေး.. လို့ ပြောလို့ စိတ်ထဲ ခိုးလိုးခုလု ဖြစ်ပေမဲ့ ရွာထဲက အစွာဆုံး ဆူး ကိုတော့ တွေ့ချင်သား သူနောက်လို့ နာမည် ပျက်ရတာ သိမယ် ဆိုပြီး အတွေးနဲ့ ကြိမ်းနေတာပေါ့။
အားလုံး ခင်ခင် မင်မင် တွေ့ကြမယ် လို့ အီးတုံးက ပြောလို့ သွားမှာပါ ဆိုတဲ့ နွယ်ပင်ပေါ့။
သမီး အာဖျံကွီးပါ ရွာသူတွေ ရိုက်ပွဲ လိုက်ဆွဲ ပေးချင်လို့.. အဲ.. ရင်းနှီးအောင်လို့ ပါနော်..
ဆူး ကတော့ တွေ့ဆုံပွဲ အခြေအနေကောင်း ရဲ့လားလို့ သတင်းစောင့်နေတာ..
ကျနော် ဖတ်တီး ညာမဖြီးဘူး.. .ဒီကလေးတွေ တော်တော် နားငြီးတယ်ဗျ ပြောလို့ကို မပြီးနိုင်ဘူး။ တယောက် တပေါက်နဲ့ တော်တော် ဆူတဲ့ ကလေးတွေပေါ့။ ဒီထဲမှာ အသက် အကြီးဆုံး ဆိုတော့ သူတို့ စားတာလည်း တာဝန် ယူရအုံးမယ်။ အမလေး.. ချောင်ပိတ်မိနေပြီ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။ အကြံထုတ်ရမယ်။
တော်တော် စကားများတဲ့ ဆူး ပဲနော်.. သူချည်းပဲ တန်းစီ စကားပြောတာ နွယ်ပင်တောင် အားနာလို့သာ ထိုင်နေရတာ နားကို ငြီးလို့ တကယ်ပါပဲ။
ဟဲဟဲ.. ဘာပဲ ပြောပြော တွေ့ဆုံပွဲကတော့ ပြီးသွားပြီ လေလည်း အားရပါးရ ထုတ်ပြီး ပြီ ဆိုတော့ ပြန်တော့မှာပေါ့.. အားလုံးပဲ နောက်မှ တွေ့မယ် လို့ ကျနော် အီးရိုး နုတ်ဆက်တယ်ဗျ။
ဟဲဟဲ.. ဝေေ၀ တို့က ဒီလို ဖြစ်မယ်မှန်း သိလို့ ခရီးထွက်လိုက်တာ မှန်သွားတာပေါ့..
မမ နဲ့ ပဒုမ္မာ ကတော့ ငါတို့ကို လမ်းမလျှောက်တတ်သေးဘူး ထင်လို့ ကျော်ချသွားတာ ထင်တယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။
အဲဒီမှာ အီးတုံး ကုတင်ပေါ်က ထပ်ပြီး ပြုတ်ကျတော့တာပဲ..ဒီတခါပြုတ်ကျတာ ရိုးရိုး ကျတာ မဟုတ်ဘူး အောက်ထပ်အိမ်က ချက်တဲ့ ကုလားဟင်း အနံ နဲ့ ဟော့ပေါ့အနံ မှားပြီး မက်တဲ့ အိပ်မက် ဖြစ်နေလို့ပါကွယ်။
အိပ်မက် ထဲက ကိစ္စတွေကို စာအဖြစ် သီကုံးပြီး ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ဆူး က လျို့ဝှက်ချက်များ ဖောက်သည် ချ လိုက်ပါသည်။
(မမ နဲ့ ပဒုမ္မာ ကတော့ ငါတို့ကို လမ်းမလျှောက်တတ်သေးဘူး ထင်လို့ ကျော်ချသွားတာ ထင်တယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။)
ရွာထဲရောက်မှ မမ နဲ့ ပဒုမ္မာ လည်း အမွှာဖြစ်နေပါပြီကောလား။
အဲဒီလောက်ထိ ငယ်သွားတာ တော်သေးတာပေါ့။
ဒါ့ထက်ပိုငယ်ရင် တွေ့ဆုံပွဲတက်ဖို့ ချိုလိမ်တပ်နေရဦးမယ်။
မဝေပုံကို ဘယ်တုန်းက ခိုးရိုက်လိုက်တာလဲ …
မဝေ နဲ့ ဖုန်းပြောတုန်းက ရိုက်ထားတာပေါ့ အမ မသိလိုက်ဘူး မလား.. ဟဲဟဲ
ခေါတိုင်းသာ သွားဖြစ်နေရင် လူတိုင်းရဲ့ သွားတွေ အကုန် ခေါ နေမှာပေါ့နော်။ ဟိဟိ။
ဒါတော့ နယ်မြေဒေသ ခွဲခြားတယ် ။ တောမှာ နေတဲကသူတွေဆိုတော့ ချန်ထားတယ်။ အိမ်မက်ဘဲ တကယ်မဟုတ်မှ မဟုတ်တာ၊ အိမ်မက်ထဲမှာ လာဖို့ လွယ်လွယ်လေး ။ အဲဒီအိမ်မက်ထဲတော့ ထည့် ပေးသင့်တာပေါ့ ဒို့ မန်းလေးသားတွေ ကို မေ့ထားတယ်။
ဆူးရေ နွယ်ပင်လဲ စကားများပါတယ် အကြောင်းမသိလို့ပါ အီးရိုးက သူချည်းဖိပြောနေတာနဲ အလှည့်ကိုမေ၇ာက်လို့ မပြောခဲ့ရတာ ဒါတောင်အိမ်မက်ထဲမှာနော် .
ဆရာ ဒို့က င ပျောာာာာာာာာာာာာာ သီးးးးးးးးးကြိုက်တယ်။
ဆရာက ပန်းးးးးးးးးးး သီးကြိုက်တယ်။
ဆူးနော် .. မရှင်းမရှင်းနဲ့ရေးထားတယ် ….
ဖတ်ပြီး ခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်မိပါတယ်… .။ ဆူးတော်တယ် ။
တုံးက စာဖတ်နေတုန်း ခွက် ကိုင်ထားလို့လား :ideal
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေကို မူတည်ပြီး ဒီလိုလေးတွေ ရေးတတ်တဲ့ ဆူး နဲ့ အီးတုံကို ချီးကျူးပါတယ် ……..
ဟုတ်တယ်….တကယ်တော်ကြတယ် …မနေ့က အိတုံ ပိုစ့်ဖတ်တုန်းကလည်း
ဟာငါတော့ ရွာထဲမ၀င်တာကြာလို့ ကျန်ခဲ့ပြီအောင့်မေ့တာ….
တွေ့ဆုံပွဲမှာ နာလည် ပါဘူးနော်……… ဘာလဲ အပြင်မှာ တွေ့ချင်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တာပေါ့လေ.. အဟင့် ဟင့်….
မနောက ဟိုတခါ တွေ့ဆုံပွဲလုပ်တုန်းက လာမလိုလို ရေးပြီးမလာလို့တဲ့ … ဟီးဟီး အိပ်မက်ထဲမှာ ပြောပါတယ် …။ နောက်တခါမက်လျှင်ထည့်ပေမယ် စိတ်ချ စိတ်ချ
နိုင်ဂျံဂါး နေသူတွေတော့ မပါဘူးပေါ့။ လာမလို့ပဲ လေယာဉ်ဘီးဖက်ပြီးလေ။
မောင်ကင်း က ဘယ်မှာ မနေတော့တာလဲ.. လူ့ပြည်မှာ မနေတော့တာလား။ ဟီးဟီး..
လူပြည်မှာ မနေတော့ဘူး ဆိုရင် ယမမင်းက သမီးကညာ အခါမလင့်စေချင်လို့ အမြန်လာပါတဲ့။
ယမမင်းသမီးလား မအားသေးဘူးလို့ပြောထားပေးပါအုန်း ရက်ချိန်း နှစ်တစ်ရာလောက်ကြိုယူရမယ်ဆိုတဲ့ စည်းကမ်းကို အန်တီဆူးက ပြောထားဘူးလား
ဒီမှာ လူ့ပြည်က အချောအလှ သဘောကျတဲ့ ပျိုကညာတွေက ကိုယ်မပါရင် ခေါင်းပဲလာခဲ့ပါလို့ အဲ … ကိုကိုမရှိရင် မနေနိုင်ပါဘူးဆိုလို့ လိုက်တွေ့နေရလို့ အားသေးဘူးလေ ….. ခုလဲ သွားရမှာက နတ်ပြည်က သိကြားမင်း သမီးတော်နဲ့ချိန်းထားသေးလို့ဗျ (ဒါတောင်လူရင်းတွေမိုလို့ သိကြားကိုထောက်ပြီး သွားတာ)
(ကျွန်တော် အာဂ တွေ့လို့ကတော့ အပြတ်ရှင်းဖို့ အားထုတ် နေတာပေါ့ကွယ်)
စားပြီးသမျှ ကျသလောက် ရှင်းပေးရင် ပိုကောင်းမလားလို့.. အကြံပေးတာနော် ရွာသား အကျော် မစ္စတာ အာဂ ရေ။
သားတစ်လမှ မြန်မာငွေ သုံးသောင်းပဲသုံးခွင့်ရှိတဲ့လူမို့…အခွင့်လေးများကြုံရင် ရှင်းပေးချင် သဗျ..ဗျာ..။ ဂေဇက်က ငွေများရတဲ့နေ့တော့ ထမင်းရည်ချောင်းစီး မောင်းတီးပြီး တစ်ရွာလုံးကို အပြတ်ကျွေးဖြစ်မယ်ဗျာ..(ဒါကြောင့် အဲဒီနေ့က အိပ်ယာကမထချင်ယောင် ဆောင်နေတာ..)။
ဒါကြောင့်လည်း မိန်းမက အိုးမှောက်ခဲ့တာတဲ့ အဟီး ။
အိုးမှောက်ထားလို့ ဗလ ပြထားတာပေါ့.. ဟိုကလည်း ကြောက်ပါပြီတဲ့ အသံပေးသွားတယ်။ ဟီးဟီး
ကိုပေါက်ကတော့ တစ်နေ့တွက်လက်ဖက်ရည် 3ခွက်ဘုိး 600ဘဲရတယ်။
အပြင်သွားစရာ လမ်းစရိတ်မရှိလို့ 200 လောက်ခဏပေးပါ
အဲဒီ ၂၀၀ လမ်းစရိတ်လုပ်ပြီး တနေ့က ချေးထားတဲ့ ၅၀၀ ပြန်လာဆပ်ချည်။ ဒါပဲ
ကိုပေါက်က ရွာသူ ရွာသားတွေ အားကိုးနဲ့ မဒမ်ပေါက်ကို အာခံနေတာ ပေ့ါလေ။ (ပုဆိုးခြုံထဲက လက်သီးပြနေတာ။) မစ္စတာ အာဂ ရဲ့ အလှုမှာ ဝါးဖို့ ခုကတည်းက ဝမ်းနှုတ်ထားရမလား။
ရန်ကုန်က M.G ရွာသား တွေလဲ အိမ်မက်ထဲမှာ တွေ့ဆုံကြပြီ ..မန္တလေးက M.G ရွာသားတွေလဲ တွေ့ဆုံကြမယ်တဲ့ ..ဒီရွာထဲ သန်လျှင်က ဘယ်သူမှ မရှိကြဘူးလား…ဟေ !